ပရီးမီးယားလိဂ်ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်တွင် ချန်ပီယံ မန်စီးတီးထက် လီဗာပူးပိုရ၊ ဒုတိယဖြင့် ထပ်မ?? - Yangon Media Group
လီဗာပူးအသင်းသည် ပရီးမီးယားလိဂ် တွင် ဒုတိယနေရာဖြင့်သာကျေနပ်ခဲ့ရသော် လည်း တစ်ရာသီအတွင်း တိုက်ရိုက်ထုတ် လွှင့်ခွင့်ရသည့်ပွဲအရေအတွက်တွင် မန်စီး တီးထက်သာလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်ပိုရခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ချန်ပီယံဆုအတွက် အားပြိုင်မှုတွင် အရေးနိမ့်ခဲ့ရသော်လည်း လီဗာပူးအနေဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှရရှိလာသော ဆုကြေး ပမာဏချင်းနှိုင်းယှဉ်မည်ဆိုပါက မန်စီးတီး ထက် ပေါင် ၁ ဒသမ ၅သန်းပိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လီဗာပူးအသင်းမှာ ယမန်နှစ်က ၎င်းင်းတို့၏ပွဲစဉ်များကို Sky Sports နှင့် BT Sport တို့မှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခံခဲ့ရ သည်မှာ ၂၉ ပွဲအထိရှိခဲ့ပြီး ယင်းမှာ ဒုတိယ နေရာမှ မန်ယူထက် နှစ်ပွဲသာလွန်ခဲ့သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းများ အနေဖြင့် ရုပ်သံမှပြသခံရသောပွဲများအ တွက် အနည်းဆုံး ပေါင် ၁၂ ဒသမ ၅သန်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၁ဝ ပွဲထက်ပို၍ ပြသခံရမည် ဆိုပါက တစ်ပွဲလျှင် ပေါင် ၁ ဒသမ ၂ သန်း ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ရာ လီဗာပူးအနေဖြင့် ချန်ပီယံမန်စီးတီးထက်ပို၍ ဝင်ငွေအကျိုး အမြတ်ပိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မန်ယူအနေဖြင့် အဆင့်-၆ နေရာသာ ရရှိခဲ့သော်လည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခံရ သည့်ပွဲ ၂၇ ပွဲရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း ဆုကြေး ၁၄၂ ဒသမ ၅သန်းရရှိခဲ့ပြီး အဆင့်-၅ နေရာမှ အာဆင်နယ်နှင့်များစွာ ကွာဟခြင်းမရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဟက်ဒါဖီးလ်အသင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှ အစောဆုံးတန်းဆင်းခဲ့ရပြီး ဇယား အောက်ဆုံး၌သာရပ်တည်ခဲ့သော်လည်း ပေါင် ၉၆ ဒသမ ၅ သန်းရရှိခဲ့သဖြင့် တစ် ကျော့ပြန်တန်းတက်ခွင့်ရရေး အင်အား ဖြည့်တင်းမှုများအတွက် ကောင်းစွာသုံးစွဲ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်ယူနည်းပြ ဟောင်းမော် ရင်ဟိုက လီဗာပူး အနေဖြင့် ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဒုတိယနေရာဖြင့်သာ ထပ်မံ ကျေနပ်ခဲ့ရမည်ဆိုပါက နည်းပြက လော့ပ်အတွက် လက်ခံနိုင်ရန်ခက် ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကလော့ပ်သည် ဒေါ့မွန်ကို တာဝန်ယူခဲ့စဉ် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က ရီး ရဲလ်ကိုရှုံးပြီး ဒုတိယသာရခဲ့သလို ယမန်နှစ်ရာသီကလည်း ရီးရဲလ်ကို ထပ်မံအရေးနိမ့်ကာ ဒုတိယနေရာ ဖြင့် ထပ်မံကျေနပ်ခဲ့ရသည့်အတွက် လာမည့်စပါးနှင့်ပွဲတွင် ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဒုတိယရခြင်းထပ် မဖြစ်စေရန်လိုအပ်နေသည်။ ယမော်ရင်ဟိုက ”ဗိုလ်စွဲခဲ့ရင် ကလော့ပ်အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ သုံးကြိမ်မြောက် ရှုံးခဲ့တယ်ဆို ရင်တော့ သူ့အတွက် ခက်ခဲပါ လိမ့်မယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
ပဲရစ် မြို့လယ်ကောင် ဓားကိုင် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွား၊ လူလေးဦး ဒဏ်ရာရ၊ အကြမ်းဖက်သမားအား အသေပစ??
ဟောလိဝုဒ် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ ကျဆင်းသော်လည်း ရုံဝင်ခ တတိယအများဆုံး နှစ်အဖြစ် စံချိန်တင်